Empira - Wikipedia
Ny Empira Rômana tamin' ny fara fiitaran' ny tany feheziny tamin' ny taona 117, tamin' ny fotoana nahafatesan' ny emperora Traiano.
Ny empira na ampira dia fanjakana manana ny fiandrianany mampiray fanjakana maro sy vahoakam-pirenena maro amin' ny alalan' ny fahefana tokana iraisana tsy miankina amim-pahefana hafa na ara-pôlitika na ara-pivavahana, izay matetika tapahin' ny atao hoe "emperora" na "mpanjakan' ny mpanjaka".
Hatramin' ny nisiany ka hatramin' ny fiafaran' ny taonjato faha-19, ny hoe "empira" dia rafitra manambara fanjakana maro mahafaoka ny tontolo fantatra, araka ny môdelin' ny Empira Rômana sy ny Pax Romana ("fiadanana rômana"). Izany hevitry ny hoe "empira" izany dia nanjaka tao amin' ny filôzôfia pôlitika – hatramin' i Dante, i Vico sy i Machiavel, ka hatramin' i Kant – dia neretreretina ho fomba itandroana ny fandriam-pahalemana. Tamin' ny fiafaran' ny taonjato faha-19 anefa dia nitranga ny fifanoheran' ny empira mpifanandrina: ny Empira Alemàna, ny Empira Britanika, ny Empiran' i Japàna, sns. Amin' i Hobson, ny rohy nisy teo amin' ny empira sy ny fifandraisana iraisam-pirenena dia rava.
Ny empira mifototra amin' ny tany, toy ny Empira Rômana na ny Empira Rosiana, dia nanana firehana ho lasa vongana iray; ny empiran-dranomasina – toy ny an' ny Empiran' i Kreta izay niseho tamin' ny alalan' i Minôsy izay nialoha ny Empira Ateniana sy ny Empiran' i Kartago na ny Empira Britanika – dia nana rafitra malaladalaka kokoa sy tany miparitaka. Amin' ny ankapobeny, ny famoronana empira dia mitaky fakana tany ataon' ny miaramila indray mandeha na imbetsaka izay heverina ho fampiraisana sy hananan' ny vahoaka rehetra hoavy iraisana: izany no niseho tao Ejipta Ambony sy Ejipta Ambany, ny fanjakà-mpanjaka fito tany Sina.
Raha ny tena marina, ny famaritana ny atao hoe "empira" dia manjavozavo satria tsy manondro fandaminana ara-pôlitika mazava. Maro ireo repoblika (Atenay tamin' ny taonjato faha-5 tal. J.K.), ireo fanjakà-mpanjaka (i Aotrisy tamin' ny taonjato faha-19) na ny kônfederasiona (ny Empira Masina Jermanika tamin' ny Andro Antenatenany) nantsoina hoe "empira". Ny teny hoe "empira" dia mbetika anondroana firenena demôkratika (i Frantsa tamin' ny Repoblika Fahatelo), mbetika ilazana firenena anjakan' ny jadona (ny Empira Rosiana tamin' ny taonjato faha-19), na koa fanjakana anjakan' olom-bitsy (ny Empira Rômana).
Empira tamin' ny Andro Taloha:
Empira Vaovao tany Ejipta
Empira Voalohany tao Ejipta
Empira Antenantenany tany Ejipta
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Empira&oldid=1011830"
Voaova farany tamin'ny 18 Mey 2021 amin'ny 15:01 ity pejy ity.